Galaxy Z Flip တွင်းရှိ AR ဇုုန်ပေါ်တွင် မည်သည့်သွင်ပြင်များ ရရှိနိုုင်ပါသလဲ။ ? | Samsung Myanmar
Galaxy Z Flip တွင်းရှိ AR ဇုုန်ပေါ်တွင် မည်သည့်သွင်ပြင်များ ရရှိနိုုင်ပါသလဲ။ ?
AR(အားဖြည့်ထားသော အမှန်တရား) သွင်ပြင်အားလုုံးကိုု တစ်နေရာထဲ AR ဇုုန် တွင် အားရကျေနပ်စွာရရှိအသုုံးပြုပါ။
ယင်းက သုုံးစွဲသူအား နေရာတစ်နေရာထဲမှ ဖုုန်း၏ အမှန်တရားအခြေခံ သွင်ပြင်များ စုုစည်းမှုတစ်ခုုလုုံးကိုု တစ်ခါတည်းနှင့်အားလုုံးရရှိစေသည့် နေရာတစ်ခုဖြစ်သည်
AR ဇုုန် တွင်းပါရှိသော သွင်ပြင်များအသေးစိတ်
AR အီမိုုးဂျီး ကင်မရာ (Emoji Camera)- က သင်နှင့်တူသည့် ကျွန်ုုပ်၏ အီမိုုးဂျီး ကိုု ဖန်တီးပေးပြီး ကျွန်ုုပ်၏ အီမိုုးဂျီး (My Emoji) သိုု့မဟုုတ် သရုုပ်ဆောင် အီမိုုးဂျီးများ (character emojis) ကိုု အသုုံးပြုကာ ဓာတ်ပုုံများရိုုက်ပြီး ဗွီဒီယိုုများ ရိုုက်ကူးနိုုင်ပါသည်။
AR ဒူဒယ်လ် - က စိတ်ကူးလက်ရေး သိုု့မဟုုတ် မျက်နှာပေါ် သိုု့မဟုုတ် တစ်နေရာရာပေါ်တွင် ပုုံရေးဆွဲချက်များဖြင့် ပျော်စရာဗွီဒီယိုုများ မှတ်တမ်းတင်နိုုင်ပါသည်။
AR အီမိုုးဂျီး စတူဒီယိုု- က Edit or decorateaကျွန်ုုပ်၏ အီမိုုးဂျီး (My Emoji) ကိုု ပြုပြင် သိုု့မဟုုတ် အလှဆင်ပေးကာ ကျွန်ုုပ်၏ အီမိုုးဂျီးအား စိတ်ကြိုက်ပက်တမ်များ နှင့် အရောင်များဖြင့် အဝတ်အစားများဖန်တီးပေးသည်။
AR အီမိုုးဂျီး စတစ်ကာများ - My Emoji ဖော်ပြချက်များ နှင့် လှုပ်ရှားမှုများဖြင့် သင့်ကိုုယ်ပိုုင် စတစ်ကားများ ဖန်တီးပါ။
ဓာတ်ပုုံ အလှဆင်ခြင်း (Deco Pic)- ဓာတ်ပုုံ သိုု့မဟုုတ် ဗွီဒီယိုုများကိုု စတစ်ကာအမျိုးမျိုးဖြင့် ရိုုက်ကူးပါ။
AR ဇုုန်ကိုု Galaxy Z Flip တွင်း ဖွင့်ပုုံ
AR ဇုုန်ကိုု ဖွင့်ရန် အောက်တွင် မှတ်သားထားသော နည်းလမ်းများကိုု ကျေးဇူးပြုပြီး ရည်ညွှန်းပါ။ -
AR Zone အက်ပ် ကိုု ဖွင့်ပါ။
ကင်မရာ အက်ပ် ကိုုဖွင့်ပါ → အပိုုဆောင်း → AR ဇုုန်.
မှတ်သားရန် - ရရှိနိုုင်သောသွင်ပြင်များက ဒေသ သိုု့မဟုုတ် ဝန်ဆောင်မှု ပံ့ပိုုးသူအပေါ်မူတည်ကာ အမျိုးမျိုးကွဲပြားနိုုင်ပါသည်။
AR အီမိုုးဂျီး ကင်မရာ Click to Expand
သင်နှင့် ပုုံစံတူသည့် ကျွန်ုုပ်၏ အီမိုုးဂျီး ကိုု ဖန်တီးပြီး ကျွန်ုုပ်၏ အီမိုုးဂျီး (My Emoji) သိုု့မဟုုတ် သရုုပ်ဆောင် အီမိုုးဂျီးများ (character emojis) ကိုု အသုုံးပြုကာ ဓာတ်ပုုံများရိုုက်ပြီး ဗွီဒီယိုုများ ရိုုက်ကူးနိုုင်ပါသည်။
အဆင့် ၁။ အီမိုုးဂျီးအသစ်တစ်ခုု ဖန်တီးရန် "+" အိုုင်ကွန်ကိုု ခေါက်ပါ သိုု့မဟုုတ် ရှိပြီးသား ချစ်စရာအီမိုုးဂျီးတစ်ခုုကိုု သင်ရွေးချယ်နိုုင်ပါသည်။
အဆင့် ၂။ အီမိုုးဂျီးအသစ်နှင့် တစ်ထပ်တည်းကျရန် သင်ကိုုယ်တိုုင်၏ပုုံကိုု စခရင်အလယ်တွင် ဖမ်းယူပါ။
အဆင့် ၃။ သင့်အီမိုုးဂျီး၏ ပုုံစံကိုုရွေးချယ်ပါ။ (အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီ။ ယောင်္ကျားလေး၊ နှင့် မိန်းကလေး)
အဆင့် ၄။ သင့်ကိုုယ်ပိုုင် စတိုုင်ကိုု သင်ရွေးချယ်နိုုင်ပါသည်၊ သိုု့မဟုုတ် အဝတ်အစားအသစ်များကိုုပင် သင် ဒီဇိုုင်းထုုတ်နိုုင်ပါသည်။
အဆင့် ၅။ သင်၏ အီမိုုးဂျီးအသစ်ကိုု စတိုုင်ထုုတ်ပေးပြီးနောက် ရှေ့ဆက်ပါ (Next) ကိုု ခေါက်လိုုက်ပါ၊ နောက်တစ်ကြိမ်တွင် စတိုုင်ကိုု သင်ပြောင်းနိုုင်ပါသည်။
အဆင့် ၆။ ယခုု သင်နှင့်ပုုံစံတူသော သင့် အီမိုုးဂျီးဖြင့် ကစားခြင်း၊ ဓာတ်ပုုံရိုုက်ခြင်း၊ နှင့် ဗွီဒီယိုုရိုုက်ကူးခြင်းများကိုုလုုပ်နိုုင်ပါပြီ။
မှတ်သားရန်- ယခုုပုုံရိပ်သည် အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် နမူနာတစ်ခုုသာဖြစ်ပါသော်လည်း သင့်နိုုင်ငံသုုံး ဘာသာစကားဖြင့်လည်း ရရှိနိုုင်ပါသည်။
AR အီမိုုးဂျီး စတစ်ကာမျာ Click to Expand
My Emoji ဖော်ပြချက်များ နှင့် လှုပ်ရှားမှုများဖြင့် သင့်ကိုုယ်ပိုုင် စတစ်ကာများ ဖန်တီးပါ။
အဆင့် ၁။ စတင်ပါကိုု ခေါက်လိုုက်ပါ။
အဆင့် ၂။ သင့်ကိုုယ်ပိုုင် စတစ်ကာများ ဒီဇိုုင်းထုုတ်ပြီး သိမ်းပါ။
အဆင့် ၃။ စတစ်ကာများကိုု ရွေးပြီး ဒေါင်းလုုပ် လုုပ်ပါ။
အဆင့် ၄။ သင်ဒေါင်းလုုပ် လုုပ်လိုုက်သည့်ဓာတ်ပုုံဂယ်လာရီ (photo gallery)တွင်း သင့်ကိုုယ်ပိုုင် အီမိုုးဂျီး စတစ်ကာများကိုု တွေ့မြင်နိုုင်ပါသည်။.
AR ဒူဒယ်လ် Click to Expand
မျက်နှာများပေါ် သိုု့မဟုုတ် အခြားတစ်နေရာရာပေါ်တွင် စိတ်ကူးယဉ် လက်ရေးများ သိုု့မဟုုတ် ပုုံများဖြင့် ပျော်စရာဗွီဒီယိုုများ မှတ်တမ်းတင်ရိုုက်ကူးနိုုင်ပါသည်။ ကင်မရာ မျက်နှာ သိုု့မဟုုတ် နေရာတစ်ခုုကိုု သတိပြုမှတ်မိသောအခါ မျက်နှာပေါ်ရှိ ဒူဒယ်လ်က မျက်နှာရွေ့သည့်အတိုုင်း လိုုက်ရွေ့ကာ နေရာတွင်းရှိ ဒူဒယ်လ်ကမူ ကင်မရာရွေ့နေလျင်တောင်မှ တစ်နေရာတည်းတွင် အသေရှိပါလိမ့်မည်။
အဆင့် ၁။ ကင်မရာအရာ အရာဝတ္ထုတစ်ခုုကိုု သတိပြုမှတ်မိသောအခါ မှတ်မိသိရှိသောဧရိယာက စခရင်ပေါ်တွင် ပေါ်လာပါလိမ့်မည်။
အဆင့် ၂။ မှတ်မိသိရှိသော ဧရိယာအတွင်း ရေးသားပါ သိုု့မဟုုတ် ပုုံဆွဲပါ။ သင် မှတ်တမ်းတင် (Record) သည့် အနီစက်တစ်ခုုကိုု ခေါက်လုုိက်သည့်အခါ ဒူဒယ်လ် စတင်ပါသည်၊ သင့်ကိုုယ်သင် ဒူဒယ်လ်လုုပ်နေပုုံကိုု မှတ်တမ်းတင်နိုုင်ပါသည်။
အဆင့် ၃။ ဗွီဒီယိုုတစ်ကား မှတ်တမ်းတင်ရိုုက်ကူးရန် မှတ်တမ်းတင် (Record) ကိုု ခေါက်လိုုက်ပါ။
အဆင့် ၄။ ဗွီဒီယိုုရိုုက်ကူးခြင်းကိုု ရပ်တန့်ရန် ရပ်ပါ (Stop) ကိုု ခေါက်လိုုက်ပါ။ ဗွီဒီယိုုကိုု ဓာတ်ပုုံဂယ်လာရီ (Photo Gallery)တွင်း သင်ကြည့်ရှုနိုုင်ပါသည် သိုု့မဟုုတ် မျှဝေနိုုင်ပါသည်။.